Elisa Huu Ogya Teaseɛnam​—Wo Nso Ɛ? | Adesua
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | August 2013
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Myanmar Ndebele Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Umbundu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Elisa Huu Ogya Teaseɛnam—Wo Nso Ɛ?
Bere bi na Siria hene rehwehwɛ Onyankopɔn diyifo Elisa akyere no. Ɔtee sɛ Elisa akɔhyɛ Dotan; ɛyɛ kurow a ɛda bepɔw so a wɔatow ho ɔfasu. Ade sae no Siria hene ma wɔde apɔnkɔ, ɔko nteaseɛnam, ne asraafodɔm kɔɔ Dotan. Ade kyee no, na n’asraafodɔm no atwa kurow no ho ahyia.—2 Ahe. 6:13, 14.
Bere a Elisa somfo sɔre kɔɔ abɔnten no, ohuu atamfo a wɔrepɛ odiyifo no akyere no no. Ɔteɛɛm sɛ: “Ao me wura! Yɛbɛyɛ dɛn?” Nanso Elisa ka kyerɛɛ no sɛ: “Nsuro, efisɛ wɔn a wɔka yɛn ho no dɔɔso sen wɔn a wɔka wɔn ho.” Afei Elisa bɔɔ mpae sɛ: “O Yehowa, mesrɛ wo, bue n’aniwa na onhu.” Bible toa so sɛ: “Ntɛm ara na Yehowa buee ɔsomfo no aniwa, na ohuu nea ɛrekɔ so; ɔbɛhwɛ a, ogya apɔnkɔ ne nteaseɛnam na ayɛ mmepɔw no so mã atwa Elisa ho nyinaa ahyia yi.” (2 Ahe. 6:15-17) Dɛn na yebetumi asua afi asɛm yi mu ne nsɛm foforo a ɛkɔɔ so wɔ Elisa asetenam?
Bere a Siriafo betwaa Elisa ho hyiae no, wammɔ hu efisɛ ɔde ne ho too Yehowa so na ohui sɛ ɔrebɔ ne ho ban. Ɛnnɛ, yɛnhwɛ kwan sɛ anwonwade bi besi nanso yehu sɛ Yehowa rebɔ ne nkurɔfo ho ban. Sɛ wohwɛ a ɛte sɛ nea ogya apɔnkɔ ne nteaseɛnam atwa yɛn ho ahyia. Sɛ yegye di sɛ Yehowa rebɔ ne nkurɔfo ho ban na yɛde yɛn ho to no so bere nyinaa a, ‘yebenya ahotɔ’ ne Yehowa nhyira. (Dw. 4:8) Ma yɛnhwɛ sɛnea nsɛm foforo a esisii wɔ Elisa asetenam betumi aboa yɛn.
ELISA BƐYƐƐ ELIA SOMFO
Bere bi na Elisa refɛntɛm asase bi, na odiyifo Elia kɔɔ ne nkyɛn de n’atade koguu ne so. Elisa huu nea na Elia repɛ akyerɛ. Enti Elisa too pon, na ɔne ne papa ne ne maame dii nkra, na otu fii fie kɔsom Elia. (1 Ahe. 19:16, 19-21) Na Elisa ayɛ krado sɛ ɔbɛyɛ adwuma biara a Yehowa de bɛma no, enti Yehowa nso de no yɛ adwuma paa, na akyiri yi ɔmaa osii Elia ananmu yɛɛ odiyifo.
Elisa som Elia bɛyɛ mfe asia. Na Elisa “na ɔde nsu gu Elia nsa so.” (2 Ahe. 3:11) Saa bere no na ntere ne adinam ne asekan a yɛde didi nni hɔ, enti na nkurɔfo de wɔn nsa na edidi. Sɛ owura bi didi wie na ɔrehohoro ne nsa a, na n’akoa na ohwie nsu gu ne nsa so. Enti yebetumi aka sɛ na Elisa adwuma no bi yɛ fam-fam adwuma. Nanso ohui sɛ ɛyɛ akwannya kɛse sɛ ɔresom Elia.
Ɛnnɛ nso Kristofo pii de wɔn ho ahyɛ bere nyinaa som adwuma no mu. Nea enti a wɔyɛ saa ne sɛ wɔwɔ Yehowa mu gyidi na wɔpɛ sɛ wɔde wɔn ahoɔden nyinaa som no sɛnea wobetumi. Ebinom tu fi fie kɔyɛ adwuma wɔ Betel anaa wosisi adan anaa wɔyɛ nnwuma foforo. Nnwuma no bi wɔ hɔ a, ebia nnipa pii bebu no sɛ ɛyɛ fam-fam adwuma. Nanso ɛnsɛ sɛ Kristoni biara bu nnwuma a ɛte saa adewa da, efisɛ ɛsom bo paa wɔ Yehowa ani so.—Heb. 6:10.
ELISA ANTOTO N’ADWUMA ASE
Ansa na Onyankopɔn “rebɛfa Elia wɔ ahum mu akɔ ɔsoro no,” ɔkae sɛ omfi Gilgal nkɔ Betel. Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ enhia sɛ ɔne no kɔ nanso Elisa ka kyerɛɛ no sɛ: “Merennyaw wo.” Bere a wɔnam kwan so rekɔ no, Elia ka kyerɛɛ Elisa mprenu sɛ ɔnsan, nanso wamfa ne ti annye. (2 Ahe. 2:1-6) Sɛnea Rut bataa Naomi ho no, saa ara na Elisa nso bataa Elia ho kosii ase. (Rut 1:8, 16, 17) Adɛn ntia? Elisa hui sɛ ɛyɛ akwannya kɛse sɛ ɔbɛsom Elia efisɛ na ɛyɛ adwuma a Onyankopɔn de ahyɛ ne nsa.
Elisa twaa ɛsa fɛfɛɛfɛ too hɔ maa yɛn. Sɛ yenya hokwan bi wɔ Onyankopɔn ahyehyɛde no mu na yɛkae sɛ Yehowa na yɛresom no a, ɛbɛma yɛakyerɛ ho anisɔ paa. Biribiara nni hɔ nidi wom sen saa.—Dw. 65:4; 84:10.
“KA NEA MENYƐ MMA WO”
Bere a Elia ne Elisa nam kwan so rekɔ no, Elia ka kyerɛɛ Elisa sɛ: “Ka nea menyɛ mma wo ansa na wɔafa me afi wo nkyɛn.” Elisa bisaa biribi a ɛbɛboa no ma wasom Yehowa yiye sɛnea Solomon yɛe tete no. Ɔsrɛɛ Elia sɛ ‘ɔmma no ne honhom no abupɛn abien.’ (1 Ahe. 3:5, 9; 2 Ahe. 2:9) Tete Israel no, na abakan nya ne papa agyapade mmɔho abien. (Deut. 21:15-17) Enti nea na Elisa resrɛ ne sɛ obedi Elia ade, kyerɛ sɛ, obesi Elia anan ayɛ odiyifo. Bio, na Elisa pɛ sɛ onya akokoduru te sɛ Elia na ɔno nso twe ninkunu ma Yehowa.—1 Ahe. 19:13, 14.
Mmuae bɛn na Elia de maa ne somfo no? Odiyifo no kae sɛ: “Woabisa ade a ɛyɛ den. Sɛ wuhu sɛ wɔrefa me afi wo nkyɛn a, wubenya; na sɛ woanhu de a, worennya.” (2 Ahe. 2:10) Mmuae a Elia de maa no no ma yehu nneɛma abien bi. Nea edi kan, Onyankopɔn nkutoo na obetumi akyerɛ sɛ Elisa nsa bɛka n’abisade no. Nea ɛto so abien, sɛ Elisa nsa bɛka a, nsu mu oo, owia mu oo, na ɛsɛ sɛ ɔkɔ so ara bata Elia ho.
NEA ELISA HUI
Onyankopɔn yɛɛ Elisa abisade no maa no anaa? Bible ka sɛ: “Bere a wɔnam rekɔ na wɔrekasa no, hwɛ! ogya teaseɛnam ne ogya apɔnkɔ bɛtetew wɔn baanu ntam, na Elia faa ahum mu kɔɔ soro. Saa bere no nyinaa na Elisa rehwɛ nea ɛrekɔ so.” * Saa kwan yi na Yehowa faa so buaa Elisa abisade no. Elisa hui sɛ wɔrefa Elia akɔ, onyaa Elia honhom mu mmɔho abien, na obesii n’anan yɛɛ Onyankopɔn diyifo.—2 Ahe. 2:11-14.
Elisa faa atade a efii Elia ho guu fam no hyɛe. Saa atade no na ɛmaa nkurɔfo hui sɛ Elisa abɛyɛ Onyankopɔn diyifo. Elisa yɛɛ ade foforo maa nkurɔfo hui sɛ ɔyɛ Onyankopɔn diyifo ampa. Ɔmaa Yordan Asubɔnten no mu paee abien.
Nea Elisa hui bere a Elia faa ahum mu kɔɔ soro no maa ne ho dwiriw no paa. Obiara a obehu ogya teaseɛnam ne ogya apɔnkɔ bɛtaa n’anom! Eyi maa Elisa hui sɛ Yehowa ayɛ n’abisade no ama no. Ɛnnɛ yɛnhwɛ kwan sɛ Onyankopɔn rebua yɛn mpaebɔ a, yebehu ogya teaseɛnam ne ogya apɔnkɔ, nanso yehu adanse a ɛkyerɛ sɛ Onyankopɔn de tumi kɛse yɛ adwuma ma n’apɛde yɛ hɔ. Sɛ yɛhwɛ sɛnea Yehowa rehyira n’ahyehyɛde no fã a ɛwɔ asase so no a, ɛte sɛ nea yehu sɛ ne teaseɛnam no rekɔ n’anim.—Hes. 10:9-13.
Nneɛma pii sisii Elisa asetenam ma ohui sɛ Yehowa tumi sõ. Onyankopɔn honhom kronkron boaa odiyifo no ma ɔyɛɛ anwonwade mmiako mmiako 16. Eyi yɛ Elia de mmɔho abien. * Bere a ɛto so abien a Elisa huu ogya nteaseɛnam ne ogya apɔnkɔ yɛ bere a Siria asraafo betwaa ne ho hyiae wɔ Dotan no. Ɛno na yɛkaa ho asɛm mfiase no.
ELISA DE NE HO TOO YEHOWA SO
Atamfo twaa Elisa ho hyiae wɔ Dotan, nanso wammɔ hu. Adɛn ntia? Efisɛ na Elisa wɔ Yehowa mu gyidi kɛse. Ehia sɛ yɛn nso yenya gyidi a ɛte saa ara. Enti momma yɛmmɔ mpae nhwehwɛ Onyankopɔn honhom kronkron na yɛanya gyidi ne honhom aba no fã a aka no.—Luka 11:13; Gal. 5:22, 23.
Nea esii wɔ Dotan no maa Elisa huu nea enti a ɛsɛ sɛ ɔde ne ho to Yehowa ne n’abɔfodɔm no so. Elisa hui sɛ Onyankopɔn asoma n’abɔfo ma wɔabetwa kurow no ho ahyia na abɔ ne ho ban afi n’atamfo ho. Afei Onyankopɔn maa atamfo no ani furae, na ɔfaa anwonwakwan so gyee Elisa ne ne somfo no. (2 Ahe. 6:17-23) Saa bere no na Elisa nkwa da asiane mu nanso onyaa Yehowa mu gyidi de ne ho too no so korakora sɛnea na ɔyɛ daa no.
Momma yɛmfa yɛn ho nto Yehowa Nyankopɔn so sɛnea Elisa yɛe no. (Mmeb. 3:5, 6) Sɛ yɛyɛ saa a, ‘Onyankopɔn bɛdom yɛn na wahyira yɛn.’ (Dw. 67:1) Ɛnnɛ yenhu sɛ ogya teaseɛnam ne ogya apɔnkɔ atwa yɛn ho ahyia, nanso Yehowa bɛbɔ yɛne anuanom a wɔwɔ wiase nyinaa ho ban wɔ “ahohiahia kɛse” a ɛreba no mu. (Mat. 24:21; Adi. 7:9, 14) Seesei a ahohiahia kɛse no mmae no, momma yɛnkae bere nyinaa sɛ “Onyankopɔn yɛ yɛn guankɔbea.”—Dw. 62:8.
^ nky. 16 Elia ankɔ soro, baabi a Yehowa ne n’abɔfo wɔ no. Hwɛ September 15, 1997, Ɔwɛn-Aban kratafa 15.
^ nky. 19 Hwɛ August 1, 2005, Ɔwɛn-Aban kratafa 10.
NKONIM A YƐADI NNANSA YI
243 — Mpɛn dodow a wɔabu Yehowa Adansefo bem wɔ asɛnnibea akɛse mu wɔ wiase nyinaa
France — Wɔatua Amerika dɔla ɔpepem 8.2
Sika dodow a France aban tua maa Yehowa Adansefo wɔ December 11, 2012. Asɛm no dii mfe 15 ansa na ɛretwa
Greece — Ɔman Agyinatu Bagua
Ɔman Agyinatu Bagua no gye toom November 2, 2012 sɛ Yehowa Adansefo, Kristofo a obiara nim wɔn, wɔ hokwan sɛ wonya baabi a wobehyiam asom
20 — Mpɛn dodow a Europa Asɛnnibea a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi Ho Nsɛm So abu yɛn bem fi April 2000
South Korea — Amanaman Nkabom Bagua a Ɛhwɛ Nnipa Ahofadi So Gyinaesi
October 25, 2012 - Saa bagua yi hyɛɛ South Korea man no sɛ wɔmpata Yehowa Adansefo 388 a wɔn gyidi nti wɔankɔ sraadi no efisɛ wɔatiatia wɔn ahofadi so
Yehowa Atew Yɛn Ho
ASETENAM NSƐM Yehowa ‘Soa M’adesoa Ma Me Da Biara’
Mma Wo ‘Koma Nhuru Nhyɛ Yehowa’ Da
Awofo​—Montete Mo Mma Mfi Wɔn Mmofraase
Momma Yensusuw Yɛn Ho na Yɛnhyehyɛ Yɛn Ho Nkuran
Hu Onipa Ko a Ɛsɛ Sɛ Woyɛ
Elisa Huu Ogya Teaseɛnam​—Wo Nso Ɛ?
TETE WƆ BI KA Ɛkaa Ɔhene no Koma Paa!
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM August 2013
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM August 2013